video – The Ulwazi Programme
I-Buya Africa Student Cultural Organisation
I-BASCO iqembu labafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal abazigqaja ngemigido nangomculo wakwantu. Yize izwe lishintsha nendlela yabantu yokuphila iguquka, ngokuhamba kwesikhathi, amalungu aleli qembu akhetha ukuhlangana ngenhloso yokukhombisa ukuthi imvelaphi yawo awayokwikhohlwi, futhi kabazimisele ukwenza njalo. Bheka i-video yabo basinela abanye abafundi: Video Context This video shows a group of students from the University of KwaZulu-Natal who are … Read more
Categories People Tags BASCO, Buya Africa Student Cultural Organisation, video
INingizimu Afrika iyilizwe eligcwele abantu abahlukahlukene ngezinkolelo nangokwenza. Lokhu kuyinto abanye abayithakaselayo ngoba kwandisa amathuba okukhetha kubantu lokho okusuke kuhambisana nabo, nomuntu ngamunye. Lokhu kubonakala kahle ebuningini bamasonto nezindawo zokukhonzela. Okwehluka ekwenzeni kwamasonto obuKrestu into ekungebukhuni ukuyibona yize izintshumeyelo nolokho okugquqguzelwayo kucishe kufane. Ubuningi bamasonto benza abantu bakwazi ukukhetha lelo iminjunju yabo. Sifake nansi i-video … Read more
Kule-video engezansi sithola intokazi yaseMkhomazi idumisa ngamahubo aziwa kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika. Amahubo ewaculayo: Uyanaka uJesu Lapho ngiphela amandla x2 (Leli ihubo laduma kakhulu ngomculi weGospel, u-Andile Mbili) Ngithanda ukuqala la, Ngibongi igama Lakhe Zincane izibongo zami, Wangithenga ngegazi Lapho ngalena lukhul’ udumo Lwakhe (Leli ihubo elidala elijwayekile emasontweni amaningi aseNingizimu Afrika) Video context The … Read more
Nellie Hlongwane interviews story-teller Gcina Mhlophe for the Ulwazi Programme. Born in Hammersdale Township, Durban in 1959, Gcina Mhlophe-Becker is a well-known South African freedom fighter, activist, actor, storyteller, poet, playwright, director and author. She does her most important work through charismatic performances, working to preserve storytelling as a means of keeping history alive and … Read more
Categories News Tags Gcina Mhlophe, video